होटलमा चिया खाएर गिलास नपखालेको मा जरिवाना गराएको छ्न । | Butwal Dainik
होटलमा चिया खाएर गिलास नपखालेको मा जरिवाना गराएको छ्न ।
२०७७ अषाढ ४, बिहिबार (१० महिना अघि)
एउटा आफ्नै समाज तर सोच को स्तर कहाँ छ खै ?? बुद्दिजिबी भद्रभलाद्मीले नै हेपाहा प्रवृत्ति देखाईदिदा केही फरक पन दिने सोच पनि सेलाएर जाने अवस्था आउछ ।।
कथा जस्तै तर वास्तविक जस्तै
साना ५ बर्षे साथी साथि तर फरक छ उनिहरुमध्य एकजनाको नामको पछाडी लेखिने शब्द चाहिँ अल्लि फरक । खेल्ने उमेर त्यसै माथी कलिलो दिमाग फरक थर भएको सानो केटो लहलहै मा घर भित्र पसिहाल्यो त्यो पनि शिक्षितको घरमा नै पस्यो सामान्य गाली मात्रै खाएन उसले सामान्य शारिरिक पीडा पनि भोग्यो । यता पनि पीडा त भोग्यो नै तल्लो जात सङ्ग मित्रता गाँसेकोमा । अब त्यो कलिलो दिमाग ले भोलिको दिन मा कस्तो छाप पर्छ खै ???
साना केटा केटि जस्को सोच्ने उमेर आएकै छैन उनिहरुलाई बौद्दिक कुरा कहाँ आउँछ बिचरा उनिहरुलाई सबै आफू जस्तै हुन जस्तो लाग्छ सबै आफ्नै घर जस्तो लाग्छ र सबै आफ्ना हुन जस्तो लाग्छ समाज ले कसरी हेर्छ उनिहरुलाई पत्तो छैन । उनिहरुलाई थाहा छैन हामिले छोएको अरुले खादैन र खानु हुदैन भन्ने किन कि उनिहरुको सोच्ने क्षमताको बिकास भएको छैन ।
भोलीको कर्णदार मानिने साना बालबालिकाको कलिलो दिमागलाई हामिले आजै बाटै जातिय भेदभाब को मल हालिदिएका छौ मान्छे मान्छे ठूलो सानो भन्ने मानसिकता मा भरिदिएका छौ।। यसै पनि बुझ्न सकिन्छ हाम्रो शिक्षा प्रणाली ब्यबहारिक छैन ब्यबहार मा लागू भएन – वा गराउन चाहेनौ ?? सानै उमेरका बालबालिका लाई ब्यबहारिक कुरा सिकाईन्छ शारीरिक सरसफाई त्यो उनीहरुले सिक्छन र घरमा अभिभावक ले उनिहरुको त्यो सिकाईलाई व्यवहार मा लागू गरिदिन्छन । तर खै छुवाछूत गर्नु हुदैन भन्ने बारे कतै सिकाएको छैन । जातियताको बारेमा आदर्शका कुरा सिकाउने मास्टर साबले क्लास बाहिर आएर आफैले घरबाट ल्याएको पानी खान्छ।। घरमा साना बालबालिकालाई अर्कै बीस भर्न पछि पर्दैनन ।।। स्कुल कलेजका किताबहरु मा तर हामिले खै किन त्यही ब्यबहार मा लागू गरेका छौ अनि समानता खोजेर कहाँ पाईन्छ ।।
मानिसलाई कहि कतै नियम कानुन ले बाधेकै हो अहिले को सन्दर्भमा छुवाछूत जातिय बिभेद गरे बापत दण्डित हुने कानुन छ जस्ले गर्दा व्यवहारमा थोरै फरकपन त आएकै हो तर चेतना को स्तर एकदमै न्यून ।। हामी सबै एकै हो तल्लो जाती भनेर शोषण मा पर्ने पनि मानिस नै हुन । के उनिहरुको भावना हुदैन ?? उनिहरुलाई समाजमा सम्मान पुर्बक सास फेर्न पाउने अधिकार पनि छैन ??
धेरै उदाहरणहरु छन :
पधेरो को पानी चल्छ तर गाग्रीको पानी चल्दैन
खेतको काम चल्छ बालिनाली अन्नपात चल्छ तर खाना चल्दैन ।
यस्तै काम कतै बाट भयो भने ठुला जातिको धर्म नास हुन्छ रे अनि दण्ड जरिवाना गराईन्छ । के दण्डले गुमेको धर्म फिर्ता आउँछ र ???
बौद्दिक तथा शैक्षिक स्तर भएका मानिसहरुलाई जातिय समानता एकदमै मन पर्छ कार्यान्वयन गर्न लागिपरेका पनि हुन्छन तर आफ्नो घरमा भएको होईन अर्कैको घरमा भएको मात्र…
कतै गलत त लेखिन
कामी दाइ ले फलाम ठोके-जमिन खोस्रन पायौ
सार्की दाइ ले जुत्ता बनाए- खुट्टा जोगियो
दमाई दाइ ले कपडा सिलाए-इज्जत जोगियो
सुनार दाइ ले गहना बनायो -प्रतिष्ठा बढायो
मगर दाइ ले बहादुरी देखायो – स्वाभिमानी नेपाली भयौ
टमाटा दाईले भाडा सामाग्री बनायो – जीवन रक्षा गर्न पायौ
यिनै जात दाइ ले घर बनायो – टाउको लुकाउने ठाउँ पायौ
यी सबै काम गर्ने कसरी साना भए त ???
आफ्नो जातलाई ठूलो मान्ने हामिले चाहिँ के गर्यौ त ???
तल्लो र उपल्लो जात जोख्ने तराजु बन्थ्यो भने सायद तल्लो जात लाई नै ठूलो देखाउँथ्यो होला ।।
सबैको भावना र आत्मसम्मान एउटै हो।।।।।
कदर सबैले सबैको गर्नु पर्छ ।।।
नेपाली युवापुस्ताको अवस्था
प्रिय! तिमीसँग प्रेम गरेर मलाई “दोस्रो नवराज बिक” बन्न मन छैन।
यो संसार पहिलोपटक देखेको दिन, मेरो जन्मदिन
२१४१४ पाठक संख्या